မျက်မြင်မရသောကင်မရာဖြင့် Honor ၏ရှေ့ပြေးပုံစံတွင်ပြproblemsနာများရှိသည် Androidsis
စမတ်ဖုန်းလောကရှိနောက်လာမည့်ခေတ်များထဲမှတစ်ခုမှာအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည် မျက်နှာပြင်ကင်မရာအာရုံခံကိရိယာ။ အချို့က၎င်းသည် screen တွင်းများနှင့်တူညီသည်ဟုထင်ကြသော်လည်း၎င်းသည်မဟုတ်ပါ။
နည်းပညာသည်အခြေခံအားဖြင့်လိုအပ်သည့်အချိန်တိုင်းတွင်ပျောက်ကွယ်ခြင်းနှင့်ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်အကြောင်းပြောထားသည်။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူသည် pop-up သို့မဟုတ်လှည့်ကင်မရာများမပါဘဲကြည့်ရှုခြင်းအပြည့်အ ၀ ခံစားရမည်။ ဂုဏ် လာမယ့်အသစ်အဆန်းနဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းကိုဖွင့်ဖို့ရွေးချယ်မယ့်ကုမ္ပဏီတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။ Samsung လိုပဲ, ပြီးသားကြောင့်၌တည်ရှိ၏အတည်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင် သင်သည်သင်၏စမ်းသပ်ကိရိယာနှင့်အတူအချို့သောပြissuesနာများရှိခြင်းနေကြသည်.
သတင်းအချက်အလက်များကိုမကြာသေးမီကဂုဏ်ထူးဆောင်သမ္မတ Zhao Ming ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်သူသည် on-screen ကင်မရာနည်းပညာနှင့်ကိရိယာရှေ့ပြေးပုံစံ၏တီထွင်မှုအပြင် terminal တွင်အကောင်အထည်ဖော်နေသောလက်ရှိပြသနာများ၏တိုးတက်မှုကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
Honor လိုဂို၊ Huawei ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်
စပ်လျဉ်းသူကကြေညာခဲ့သည် ကုမ္ပဏီ၏မိုဘိုင်းဖုန်းအချို့တွင်မပေါ်မီနည်းပညာသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်သူက၎င်းသည်အောင်မြင်လိမ့်မည်ဟုယူဆပြီးမဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင်၎င်းကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းများမှပြသမည်ဖြစ်သည်။ ဤအတောအတွင်းသူမအတွက်အလားတူနမူနာကိုငါတို့တှေ့နိုငျပါသညျ က galaxy S10 နှင့် ဂုဏ်အသရေ 20 Pro ကိုလျှို့ဝှက်ခြင်းမရှိပါ
Honor သည်၎င်းနှင့်ပတ်သက်သောပြvesနာများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းသည်၊ အနာဂတ်၌၎င်းနှင့်မည်သည့်လက်ကိုင်ဖုန်းများတွင်မည်သို့ပေါင်းစည်းနိုင်မည်ကိုကြည့်ခြင်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်းများသို့သာရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ အလယ်အလတ်တန်းစားနှင့်အနိမ့်ဆုံးကိရိယာများသာမဟုတ်ပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ကန ဦး အဆင့်တွင်, အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်များသာမမြင်ရသောမျက်နှာပြင်ကင်မရာနည်းပညာအသစ်ကိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်.
Xiaomi နှင့် Oppo တို့ကရှေ့ကင်မရာဖန်သားပြင်အောက်တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပြသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Honor နဲ့ Samsung အပြင် Xiaomi က y Oppo အခြားကုမ္ပဏီ ၂ ခုလည်းရှိသည်။ မည်သည့်ထုတ်လုပ်သူများပြိုင်ပွဲတွင် ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ကိုစောင့်ကြည့်ရ ဦး မည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Honor သည်၎င်း၏ရှေ့ပြေးပုံစံပြသမှုနှင့်မမြင်ရသောမျက်နှာပြင်ကင်မရာနှင့်ပြproblemsနာများကြုံတွေ့နေရသည်
Nokia 6.2 ကိုလာမည့်ဇွန်လ ၆ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်
OnePlus7အတွက်အခက်အခဲများ - ထိတွေ့မှု input ဟာထောင့်မကျပါဘူး